တရုတ် Led အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်, Led အမှတ်တရအဝတ်လျှော်အလင်းကရိယာ, Led အမှတ်တရအဝတ်လျှော်ရေလွှမ်းမိုးအလင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး > LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်
နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး
ရှုခင်း Lighting စီးရီး
LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဦးဆောင်အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်, ဦးဆောင်အမှတ်တရအဝတ်လျှော်အလင်းကရိယာ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဦးဆောင်အမှတ်တရအဝတ်လျှော်ရေလွှမ်းမိုးအလင်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်ဆီမီးခွက်, နာမည်အကြံပြုသည်အတိုင်း, အလင်းရေကဲ့သို့မြို့ရိုးကိုလျှော်ကြကုန်အံ့, အဓိကအားဖြင့်အလှဆင်အလင်းရောင်တည်ဆောက်ခြင်းပြုပါရန်အသုံးပြုများနှင့်လည်း LED ကိုစွမ်းအင်ချွေတာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးသောကြောင့်,...
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်လက်ဆေးမြို့ရိုးကိုဆီမီးခွက် LED, ရေကဲ့သို့အလင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အလှဆင်အလင်းရောင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လည်းကြီးမားသောအဆောက်အဦကိုဖျောပွဖို့အသုံးပြုအတှကျအသုံးပွု, တန်တိုင်းရိုးကိုလျှော်ကြကုန်အံ့။ LED...
တရုတ်နိုင်ငံ LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ် ပေးသွင်း
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်လက်ဆေးမြို့ရိုးကိုဆီမီးခွက် LED, ရေကဲ့သို့အလင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အလှဆင်အလင်းရောင်တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်မြို့ရိုးကိုဆေးကြောပါပါစေနှင့်လည်းကြီးမားသော buildings.Since LED ကိုစွမ်းအင်ချွေတာမြင့်မားတောက်ပထိရောက်မှု, ကြွယ်ဝသောအရောင်များ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိပြီးဖျောပွဖို့အသုံးပြု နှင့်ရှည်သောအသက်အခြားအလင်းသတင်းရင်းမြစ်၏အဝတ်လျှော်မြို့ရိုးကိုမီးခွက်သည်တဖြည်းဖြည်း 2013 ခုနှစ်နဲ့ LED အဝတ်လျှော်မြို့ရိုးကိုဆီမီးခွက်များဖြင့်အစားထိုးသည်။
1. ပင်မပစ္စည်း: အမြင့် - ဖိအားကိုနှင်ထုတ်လူမီနီယမ်မြင့်မား - အလင်းအစွန်းရောက် - အဖြူရောင်ဖန်ထည်, နောက်ကျောလျှံနှောင့်နှေးကို ABS,
2. က Surface ကုသမှု: ခရမ်းလွန် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း;
3. အလင်းခန္ဓာကိုယ်အရောင်: အမှောင်မီးခိုးရောင်;
4. အကာအကှယျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ: silica gel ဟာလက်စွပ်ရေစိုခံ compacted;
5. ပျမ်းမျှတစ်သက်တာ: 350mA20000hours, 500mA15000hours;
6. ထိန်းချုပ်ရေးမုဒ်: CC ကို / DMX512;
7. Operating အပူချိန်: -25 ℃ ~ 50 ℃
8. ရောင်စုံအလင်းအပူချိန်: အနီရောင် / စိမ်းလန်း / အဝါရောင် / Amber / မိုးပြီးမှ / အက်ဆစ်အပြာ / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
9. အလင်းဖြန့်ဖြူး device ကို: Optical မှန်ဘီလူးစီးရီး: 8 ° / 15 ° / 25 ° / 45 ° / 10 × 30 ရက်° / 10 × 60 ° / 20 × 40 °
10. အလုပ်အဖွဲ့ဗို့: DC24V
install လုပ်ဖို့ 11. Way ကို: လူပျိုဦး / ကိုနှစ်ချက်ဦး Adjustments angle bracket
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ 12 အဆင့်: IP65
13. အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆ: 10% ~ 90%
ဦးဆောင်အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ် ဦးဆောင်အမှတ်တရအဝတ်လျှော်အလင်းကရိယာ ဦးဆောင်အမှတ်တရအဝတ်လျှော်ရေလွှမ်းမိုးအလင်း ဦးဆောင်အမှတ်တရအဝတ်လျှော်အလင်းထုတ်ကုန်များ LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်